အဖေတွေ က သားသမီးတွေ ကို ဒါတွေကြောင့် ပညာတတ် ဖြစ်စေ ချင်တာပါ….ဖတ်ကြည့်ပါ – Let Pan Daily
အဖေတွေ က သားသမီးတွေ ကို ဒါတွေကြောင့် ပညာတတ် ဖြစ်စေ ချင်တာပါ….ဖတ်ကြည့်ပါ
အဖေတွေက သားသမီးတွေ ကို ဒါတွေကြောင့် ပညာတတ် ဖြစ်စေချင် တာပါ….ဖတ်ကြည့်ပါ
အဖေ….သား ဆယ်တန်း ကျတယ် နွားစာကျွေးနေသော အဖေ ရုတ်တရတ် တုံ့သွားသည်……။ မီးဖိုချောင်ထဲ ထမင်းချက်နေသော အမေက ကြားလိမ့်မည် မထင်။ အဖေ စကားတလုံးမှ မပြောပဲ ကျတော့်ကို စူးစိုက်ကြည့်နေသည်။ ”ဟိုးမှာတွေ့လား ငါ့သား! ဓား ၂ ချောင်းစီ ကျတော့် ကိုညွန်ပြ သည်။ (စကားလမ်းလွှဲ လိုက်သည်ဟု ကျတော်ထင်) “ လှည်းပေါ်တင်ကွာ အဖေနဲ့ လယ်တော ခဏလိုက်ခဲ့ အင်္ကျီထူထူ ယူခဲ့ ”နွားညိုသိုးကြီး ၂ ကောင်ကို ဆွဲသွားပြီး အဖေ နွားလှည်းတပ်နေပြီ ။
ကျတော် အဖေ့နောက်မှ ၀င်ထိုင် လိုက်သည်။ (အတွေးထဲ ကျောင်းများ ထုတ် လိုက်သည်ဟု ထင်ခဲ့) လယ်တောရောက်တော့ အဖေ ကျတော့်ကို ထွန်တုံးဆင်ပေးပြီး ထွန်ခိုင်း သည်။ ကျတော် အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတယ်။ အဖေ ငါ့ကို တကယ်များ ကျောင်းထုတ်လိုက်ပြီလား? ကျတော့် ကို တခါမှ အလုပ် မခိုင်းဘူးခဲ့တဲ့ အဖေက ဒီလိုလုပ်တော့ အံ့သြသွားမိတာပေါ့ ကျတော် နွားကိုရိုက်လိုက်သည်
လယ်ထဲကို သုံးပတ်လောက် ပတ်မိတဲ့ အချိန် ဖြေဖဝါးတွေက သွေးကျင် ဥလာတယ်။ နေပူတဲ့ဒဏ်ကြောင့် ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ ပန်ပင်းတဲ့ဒဏ်ကို မခံစားနိုင်တော့ဘဲ ကျတော် ယိုင်ကျ သွားသည်။ ငါ့သား အဖေတို့ မင်းလို ပညာမသင်ခဲ့ရဘူး ပညာဆိုလို့ ၄ တန်း ပဲအောင်ခဲ့တာ မင်းကိုကျောင်းထားတယ် ဆိုတာ အဖေတို့လို ပန်းပင်းမှာ ဆိုးလို့ ငါ့သားသမီးတွေ ငါ့လို မဖြစ်ရလေအောင်ဆိုပြီး အဖေတို့မင်းကို ဘော်ဒါဆောင် မှာ ကောင်းကောင်း ထားပြီး စာသင်ခိုင်းခဲ့တာ
အဖေတို့ မင်းဆီက ဘာမှမျော်လင့်ချက် မရှိဘူး ငါ့သားသမီး ငါ့လို ပင်ပင်ပန်းပန်း နဲ့ မလုပ်စားစေချင် လို့ နောင်တချိန်မှာ မင်းဘဝလေး သာယာ လှပဖို့(ပြေားရင်း နဲ့ အဖေ့သံက ငိုသံပါသလိုလိုခံစားရ) ကျတော့်နောင်တနဲ့အတူ မျက်ရည်တေ ကျလာခဲ့သည် (စာမကျက်မိသည်များကို) …ဟိုးအဝေးက အမေ တလုပ်လုပ် နဲ့ ထမင်းထောင်း ကို ရွတ် လာတာမြင်နေမိသည်။ အဖေ့ကို ထာဝရစဉ်လေးစားလျက်။
မူရင်းရေးသားသူအား လေးစားစွာ credit ပေးပါသည်
အဖတှေကေ သားသမီးတှေ ကို ဒါတှကွေောငျ့ ပညာတတျ ဖွဈစခေငျြ တာပါ….ဖတျကွညျ့ပါ
အဖေ….သား ဆယျတနျး ကတြယျ နှားစာကြှေးနသေော အဖေ ရုတျတရတျ တုံ့သှားသညျ……။ မီးဖိုခြောငျထဲ ထမငျးခကျြနသေော အမကေ ကွားလိမျ့မညျ မထငျ။ အဖေ စကားတလုံးမှ မပွောပဲ ကတြေျာ့ကို စူးစိုကျကွညျ့နသေညျ။ ”ဟိုးမှာတှလေ့ား ငါ့သား! ဓား ၂ ခြောငျးစီ ကတြေျာ့ ကိုညှနျပွ သညျ။ (စကားလမျးလှဲ လိုကျသညျဟု ကတြျောထငျ) “ လှညျးပျေါတငျကှာ အဖနေဲ့ လယျတော ခဏလိုကျခဲ့ အင်ျကြီထူထူ ယူခဲ့ ”နှားညိုသိုးကွီး ၂ ကောငျကို ဆှဲသှားပွီး အဖေ နှားလှညျးတပျနပွေီ ။
ကတြျော အဖနေ့ောကျမှ ဝငျထိုငျ လိုကျသညျ။ (အတှေးထဲ ကြောငျးမြား ထုတျ လိုကျသညျဟု ထငျခဲ့) လယျတောရောကျတော့ အဖေ ကတြေျာ့ကို ထှနျတုံးဆငျပေးပွီး ထှနျခိုငျး သညျ။ ကတြျော အူကွောငျကွောငျဖွဈသှားတယျ။ အဖေ ငါ့ကို တကယျမြား ကြောငျးထုတျလိုကျပွီလား? ကတြေျာ့ ကို တခါမှ အလုပျ မခိုငျးဘူးခဲ့တဲ့ အဖကေ ဒီလိုလုပျတော့ အံ့သွသှားမိတာပေါ့ ကတြျော နှားကိုရိုကျလိုကျသညျ
လယျထဲကို သုံးပတျလောကျ ပတျမိတဲ့ အခြိနျ ဖွဖေဝါးတှကေ သှေးကငျြ ဥလာတယျ။ နပေူတဲ့ဒဏျကွောငျ့ ခြှေးတလုံးလုံးနဲ့ ပနျပငျးတဲ့ဒဏျကို မခံစားနိုငျတော့ဘဲ ကတြျော ယိုငျကြ သှားသညျ။ ငါ့သား အဖတေို့ မငျးလို ပညာမသငျခဲ့ရဘူး ပညာဆိုလို့ ၄ တနျး ပဲအောငျခဲ့တာ မငျးကိုကြောငျးထားတယျ ဆိုတာ အဖတေို့လို ပနျးပငျးမှာ ဆိုးလို့ ငါ့သားသမီးတှေ ငါ့လို မဖွဈရလအေောငျဆိုပွီး အဖတေို့မငျးကို ဘျောဒါဆောငျ မှာ ကောငျးကောငျး ထားပွီး စာသငျခိုငျးခဲ့တာ
အဖတေို့ မငျးဆီက ဘာမှမြျောလငျ့ခကျြ မရှိဘူး ငါ့သားသမီး ငါ့လို ပငျပငျပနျးပနျး နဲ့ မလုပျစားစခေငျြ လို့နောငျတခြိနျမှာ မငျးဘဝလေး သာယာ လှပဖို့(ပွေားရငျး နဲ့ အဖသေံ့က ငိုသံပါသလိုလိုခံစားရ) ကတြေျာ့နောငျတနဲ့အတူ မကျြရညျတေ ကလြာခဲ့သညျ (စာမကကျြမိသညျမြားကို) …ဟိုးအဝေးက အမေ တလုပျလုပျ နဲ့ ထမငျးထောငျး ကို ရှတျ လာတာမွငျနမေိသညျ။ အဖကေို့ ထာဝရစဉျလေးစားလကျြ။
မူရငျးရေးသားသူအား လေးစားစှာ credit ပေးပါသညျ
နာရီ တဈလုံးက ပေးသှား တဲ့ ဘဝသငျခနျးစာ
အငျတာနကျ ကွီး ပွနျပိတျသှား ရငျတောငျ Facebook နဲ့ တခွားapp တှပေါ ဆကျသုံး လို့ရတဲ့ နညျး………..Test Succeeded!! (စမျးသပျ အောငျမွငျပွီး)
အနံ့ မ ရ သညျ့ လက်ခဏာပွ လြှငျ ဒီ လို လုပျ ပါ (မြားမြား ရှယျထားပေးပါအုံး ..)